tsy mivadika tantaram-pitiavana tovovavy mavokely mavokely HF29037 lambam-pandriana, Shina tsy mivadika romantika ny tovovavy mavokely mavokely HF29037 lambam-pandriana Manufacturers, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
FABRIKA PREMIUM QUALITY - Namboarina tamin'ny velvet poly buttery premium eo anoloana ary mikrofibera malefaka ao ambadika ho an'ireo alina mangatsiaka sy ririnina. Ny fanjairana vita amin'ny embossed haingon-trano dia manampy fijery mahazatra tsy dia misy dikany, avy hatrany. Ity kitapom-pandriana lafo vidy ity dia ny lantom-peo tonga lafatra amin'ny efitrano fatoriana na efitrano fandraisam-bahiny.
Sasao amin'ny milina mangatsiaka, tsingerina malefaka, bleach tsy misy chlorine ihany rehefa ilaina, atsipazo maina ambany, etona raha ilaina, aza asiana vy. Tsy misy fiketronana, Tsy misy loko manjavozavo ary Tsy mivaha rehefa avy nosasana.
Ny fanjairana vita amin'ny kofehy malefaka sy henjana dia manakana ny kofehy tsy hiroraka mandritra ny fampiasana maharitra, ary mitazona tsara aorian'ny fanasana sy fanamainana. Mora fikarakarana sy hoditra sariaka.Ny vokatra dia nandroso Crafts sy ny fahasalamana mandroso dingana, reactive fandokoana. Ity lambam-pandriana ity dia handeha tsara amin'ny fanasana mandritra ny fotoana maharitra.